Complaint Form (Form-1)
Tue, 12/18/2018 - 04:27 -- competition
Any person who knows or suspects that someone has breached any brohibition of the Competition Law may file complaint directly to the Commission or through the Commission Office. In filing complaint, the Complaint Form (Form-1) shall be completed in Myanmar language.
Form-1 (English version).pdf
Read more about Complaint Form (Form-1)
ပထမအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
Mon, 10/11/2021 - 09:17 -- competition
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမောင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် Online မှ Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအပေါ် လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ တိုင်ကြားမှုများအပေါ် လက်ခံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းပါးစေရေးအတွက် ကော်မရှင်အနေဖြင့် အခြားဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ASEAN Competition Action Plan 2025 အပေါ် ပြုပြင်မွမ်းမံထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အတွက် နှစ်အလိုက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း အသေးစိတ်အစီအစဉ်၏ ကာလလတ်အစီရင်ခံစာအပေါ် အကြံပြုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးပြန်လည် ဦးမော့လာစေရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ၏ အခန်းကဏ္ဍများ ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးနှင့် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှု သဘောတူညီချက်အခြေခံမူဘောင်အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောတူညီချက်အခြေခံမူဘောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် (၁၂:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
Read more about ပထမအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ရုံးသစ် ပန္နက်တော်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
Thu, 09/17/2020 - 09:11 -- competition
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၈:၄၅ အချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံယှဥ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ရုံး အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ရုံးသစ် ပန္နက်တော်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်(၁/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်
Thu, 09/17/2020 - 09:09 -- competition
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင် (၁/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ကော်မရှင်အစည်းအဝေးများကို ပုံမှန် ကျင်းပလာခဲ့ရာ ပဥ္စမ အကြိမ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သကဲ့သို့ ကော်မရှင်၏ သက်တမ်းမှာလည်း တစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကာလအတွင်း၌ ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အနေဖြင့် လေ့လာသင်ယူခဲ့ရမှုများ၊ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံများမှရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်များကို ပိုမိုသိရှိလာကြကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဘက်ကလည်း ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင်အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာကြပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ လာရောက်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ၊ တိုင်ကြားမှုများကို ယခင်ကထက် ပိုမိုပြုလုပ်လာကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကဏ္ဍအလိုက် ထိန်းကျောင်းအကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (Sector Regulators)နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလဲ အလေးအနက်ထား စီမံဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏ စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ တိုင်ကြားမှုများအပေါ် ဖြေရှင်းပေးမှုများ၊ အသိပညာပေးမှုများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်သကဲ့သို့ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပိုမိုထိရောက်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစီအမံများ ကိုလည်း ညှိနှိုင်းချမှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ကော်မရှင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပရာ စတုတ္ထအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို ကော်မရှင်ရုံးက ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ​လက်ခံရရှိထားသော တိုင်ကြားမှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များက ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကာ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်(၁/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (M & A Workshop : Discussion on Merger Thresholds) ကျင်းပပြုလုပ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်းချင်း ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရယူခြင်း ပြုလုပ်မှုများကြောင့် ဈေးကွက်ထဲရှိ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ပျက်ပြားမှု မဖြစ်စေရန် ကြပ်မတ်ထိန်းကျောင်းရမည့် တာဝန်လည်းရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ စီးပွားလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရယူခြင်းတို့အတွက် Threshold တစ်ခုသတ်မှတ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပညာရပ်များနှင့်ဆန့်ကျင်မှုမရှိဘဲ လက်တွေ့နယ်ပယ်နှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ဥပဒေပညာရှင်များနှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊သက်ဆိုင်ရာဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ကြားပြီး ဆွေးနွေးမှုပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Read more about စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (M & A Workshop : Discussion on Merger Thresholds) ကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် စတုတ္တအကြိမ်ပုံမှန် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
Thu, 09/17/2020 - 09:08 -- competition
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် စတုတ္ထအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ကို ပြည်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စားသုံးသူများ၏ အားကိုးအားထားပြုနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခုအခါတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှု ကော်မရှင်သို့ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများ၊ တိုင်ကြားမှုများ လက်ခံရရှိမှု တိုးတက်လာခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကော်မရှင်ကို ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်အားထားမှု အထိုက်အလျောက်ရရှိလာပြီဆိုသည်ကို ဖော်ပြနေပါကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ အကြောင်းကိုသာမက တိုင်ကြားမှုနည်းလမ်းများကိုလည်း သိရှိနားလည်လာအောင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် မီဒီယာနှင့်ပုံမှန်တွေ့ဆုံကာ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို အသိပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ကော်မရှင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပရာ တတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ၊ လက်ခံရရှိထားသော တိုင်ကြားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ရုံးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကာ အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ၁၄:၀၀ နာရီချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် စတုတ္တအကြိမ်ပုံမှန် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်(PCC)သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း
Thu, 09/17/2020 - 09:07 -- competition
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့ထိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်(PCC)သို့ သွားရောက်၍ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုမူဝါဒ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်မှု၊ စွမ်းအား အရင်းအမြစ် လှည့်လှည်သုံးစွဲမှု၊ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှု၊ အမှုများ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမှုစသည့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အခြေ အနေများကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်(PCC)သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း
Wed, 09/16/2020 - 09:27 -- competition
Read more about Covid-19 ကပ်ရောဂါ၏ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများနှင့် ရေနံဈေးနှုန်းရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း
Wed, 09/16/2020 - 09:10 -- competition
Read more about COVID-19 ကာလအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုအပေါ် အစိုးရအာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် ထိန်းကျောင်းသင့်သည့် နည်းလမ်းများကို UNCTAD က အကြံပြု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ သိရှိနားလည် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း
Fri, 09/11/2020 - 04:25 -- dotadmin
Read more about စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ သိရှိနားလည် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း